Turkiga oo sirdoonka Maraykanka siiyay sidii loo xasuuqay suxufi Jamaal Khashooqi - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Turkiga oo sirdoonka Maraykanka siiyay sidii loo xasuuqay suxufi Jamaal Khashooqi
Turkiga ayaa sirdoonka Maraykanka siiyay sidii loo xasuuqay suxufi Jamaal Khashooqi oo markii ugu dambeysay gakay qunsuliyada Sucuudiga ee Istaanbuul dibna ayna u arag jaacaylkiisa uu iyada dartii u tagey meesha.
Sirdoonka Turkiga ayaa sheegay in Jamaal Khasooqi lagu dhexdiley qunsuliyuada dhexdeeda kadib markii la garaacay kadibna jirkiisa qurub qurub loo jarjaray.
Waxa kale oo Turkidu sheegeen in kadib falkaasi raggii dilka fuliyay iskugu tageen guriga qunsulka ee Istaanbuul, shaqaalihii halkaa joogeyna la yiri waxaad tihiin fasax.
Sirdoonka Turkiga ayaa sheegay in la helay codkii sida dilku u dhacay iyo qaylada ragii dilaayay iyo weliba codka Jamal Khasooqi.
Maraykanka iyo Sucuudiga ayaa is-weheshada weyna adagtahay in Trump talaabo ka qaado Sucuudiga oo uu hore u sheegay in aanu usbuuc sii jireyn hadayna iyagu taageerin milatari ahaan. Hadalkaas oo Trump ku celiyay markale.
Xasuuqa Jamaal Khasooqi ee qunsuliyada ayaa Turkidu ogaadeen markiiba mase rabaan in ay khashifanto waayo waxa ka baqayaan in la yiraa waxa safaaradaha idiin dhexyaala qalab wax duuba.
Erduqaan oo Sucuudigu kula jiro dagaal hoose oo diimeed ayaa isaga laftiisu rabin inuu sii xumaado xiriirka labada dal, wuxuuse garan la’yahay si uu hadda uga baxo, ayadoo mucaaradku dalbanayaan in xiriirka labada dal dib loo eego.
Waxa kale oo iyadna meesha ku jirta in gacan ku dhiiglaha Sucuudiga aan far la saarayn lacagaha iyo hubka uu ka iibsado Maraykanka, haddiise arintan oo kale ay ka dhici lahayd wadan kale la maqli lahaa guux iyo hanjabaado, taas oo ah munaafaqadii lagu yiqiinay reer galbeedka.
Sirdoonka Turkiga ayaa tusay sirdoonka Maraykanka maqal iyo muuqaal, waxase la sugayaa sida ay u qariyaan arintan.
Jamaal Khasooqi ayaa gacan ku dhiigle Salmaan ku cuney maxaad u hadashay.
Soo diyaaritii Rashiid Ceelaanyo